Ko RFID Technology Hwakachengeteka uye Private?
by pamusoro 18-08-21
Zvinosuruvarisa, kwete chaizvo kazhinji hurongwa kuti vatengi vari vangangoora pachena. Munhu ane zvakakodzera akashongedzerwa scanner uye pedyo kuwana RFID mudziyo anogona Activate uye verenga zviri zvayo. Zviri pachena, zvimwe zvaimunetsa vari kupfuura vamwe. Kana munhu anofamba nenzira bhegi rako mubhuku ...
RFID anomirira Radio-Frequency zvitupa. The Acronym zvinoreva duku yemagetsi kuti panofanira kuva Chip duku uye kanyanga namano. The Chip yemanyorero anokwanisa akatakura bytes 2,000 pamusoro Data zvichidzika. The RFID mudziyo anoshumira chinangwa chakafanana mubhawa remitemo kana rinobva ubvise pamusoro musana ...